तपाईंको सम्बन्धमा असन्तोषसँग कसरी व्यवहार गर्ने: १२ बुल्श * टिप्स छैन - सम्बन्ध
तपाईंको सम्बन्धमा असन्तोषसँग कसरी व्यवहार गर्ने: १२ बुल्श * टिप्स छैन
के तपाईंले एक पटक आफ्नो साथीको लागि महसुस गर्नुभएको प्रेम तपाईंको सम्बन्धमा आक्रोशको विनाशकारी उपस्थितिबाट क्षतिग्रस्त भएको छ?
तिमी एक्लो छैनौ।
दिक्क लाग्ने दम्पतीहरूले सामना गर्नुपरेको आम चुनौती हो।
यो अक्सर चुपचाप पृष्ठभूमिमा फिस्टर गर्दछ, आफूलाई डरलाग्दो टिप्पणीहरू, भावनात्मक फिर्ता लिने, र साझेदारहरू बीच सामान्य घर्षणमा महसुस गराउँछ।
यदि तपाइँ तपाइँको पार्टनरलाई रिसाउनुहुन्छ र तिनीहरूले तपाइँलाई रिस उठाउँछन् (जसमा यसको सामना गरौं, ती हुन सक्छ यदि तपाइँको सम्बन्ध अन्धकार ठाउँमा छ भने), तपाइँले बिरामीलाई बदमाश गर्नु अघि तपाइँ बीचको चापलाई निको पार्न तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ?
यो हामी यो लेखमा अन्वेषण गर्छौं।
एउटा केटाले तपाइँलाई मन पराउँछ तर डराएको संकेत गर्दछ
तर, पहिलो, एक परिभाषा।
आक्रोश भनेको के हो?
असन्तुष्टि भनेको कसैप्रति तपाईको खराब भावना हो जब तपाईले उनीहरूलाई नराम्रो व्यवहार गरेको मान्नुहुन्छ।
यो रीस उठेको वा चिन्तित हुनु बराबर छैन जब कसैले तपाइँको साथ नराम्रो व्यवहार गर्छ।
यो अर्को व्यक्तिको कार्यहरू, शब्दहरू वा केहीको बारेमा तिनीहरूको विश्वासको सम्बन्धमा बढी गलत ठानिन्छ।
असन्तुष्टिमा जटिलताका तहहरू हुन्छन् जुन समयसँगै निर्माण हुन्छ।
कसैले केहि गरेमा सुरुमा तपाईंलाई रिस उठ्न सक्छ, तर तपाईं तुरून्त यसको लागि रिसाउनुहुन्न।
यद्यपि, समय बित्दै जाँदा, उही चीजका दोहोरिएका घटनाहरू, र अन्य चीजहरूको चिन्ताको साथ, आज तपाईले महसुस गरेको आक्रोशलाई जम्मा गर्दछन्।
के सम्बन्धमा द्वेष उत्पन्न हुन्छ?
कहिलेकाँही, यो यो हो कि तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई केहि फरक गर्दछ र तिनीहरूको तरिका बदल्न आवश्यक महसुस गर्दैन - र त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई यसको लागि रिसाउनुहुन्छ।
कहिलेकाँही यो यति मात्र हो कि तपाईंले सुन्नु भएको महसुस गर्दैन वा तपाईंको साथीले तपाईंको समस्या वा सरोकारलाई गम्भीरताका साथ लिइरहेको छैन।
असन्तोष एक पछुतोको कारण पनि हुन सक्छ जुन तपाईं आफ्नो साथीको कारणले भएको हो भन्ने लाग्यो - उदाहरणका लागि। नयाँ शहरमा सर्दै छ ताकि उनीहरूले नयाँ काम स्वीकार्न सक्दछन्, वा अर्को बच्चा नभएको कारण तपाईंको साथीले चाहँदैन।
यो आमा वा बुबा बीचमा हुन सक्दछ जहाँ एक रहन-मा घर आमा / बुबा को लागी कदर वा ती सबै कामका लागि सराहना छैन।
यो सम्बन्धमा बढ्न सक्दछ जहाँ पुरुषले महिलाले कुक, क्लीनर, इत्यादि को लि gender्ग-रुकावट भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दछ।
प्राय: असन्तुष्टि कम सन्तुलनमा आउँछ, दुवै व्यावहारिक र भावनात्मक। तपाईंलाई लाग्छ जस्तो कि कर्तव्य र जिम्मेवारीहरू समान रूपमा साझा गरिएको छैन। वा तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ तपाइँको साथीलाई तपाइँ भन्दा बढी भावनात्मक समर्थन प्रदान।
आक्रोशले सम्बन्धहरूलाई के गर्छ?
जे होस् क्रोध रिसको लागि छुट्टै भावना हो, यो तपाईको क्रोधको रूपमा तपाईको साथीको व्यवहार र व्यवहारमा प्रायः क्रोधित हुन्छ।
जब तपाईं अनुचित महसुस गर्नुहुन्छ वा विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाईंको पार्टनरले त्यस्तो व्यवहार गरेको छ जुन तपाईंले असंतोषजनक ठान्नुहुन्छ, तपाईंले त्यसलाई धक्का दिनुहुन्छ।
दुर्भाग्यवस, तपाइँको पार्टनर बदलेमा, यसको लागि तपाइँलाई रिसाउने सम्भावना छ। तिनीहरूले पक्कै फरक चीज देख्नेछन् र उनीहरूमा तपाइँको आक्रमण तिनीहरूको कारण अनुचित व्यवहार गरेको महसुस गर्नु हो।
र यसरी द्वन्द्वको लागि शिर्षकको लागि टाईट दृष्टिकोण देखा पर्दछ जब तपाइँहरू मध्ये प्रत्येकले अर्को ले लिइरहेको स्थितिमा दु: खी महसुस गर्नुहुन्छ।
यसको एक सामान्य परिणाम हठी र सम्बन्धको आत्म-तोडफोकीको कार्यमा दुबै साझेदारहरूको भावनात्मक वापसी हो।
न त अरुप्रति साँचो मायालु कोमलता देखाउने पहिलो व्यक्ति हुन तयार छ वा डरले माफी माग्छ कि यसले दोष स्वीकार्नुलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
र यो जति लामो समयसम्म जान्छ, रिस त्यति नै प्रगाढ हुन्छ।
त्यसोभए तपाईं आफ्नो सम्बन्ध बचाउनको लागि दुबै महसुस गरेको आक्रोशलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ?
यहाँ केहि चरणहरू छन् जुन तपाईं सक्नुहुन्छ दुबै लिनुहोस्।
१. सोध्नुहोस् कि तपाइँको साथीको अपेक्षाहरु व्यावहारिक छ कि छैन।
कोहि पनि पूर्ण छैन। तपाईंको पार्टनर होइन। तिमी हैन।
पक्कै पनि, सही प्रेमी, प्रेमिका, पति, वा श्रीमती जस्तो केहि चीज छैन।
तपाईंले तिनीहरूलाई आफूले पहिल्यै आशा गरेको र सपनामा देखेको सबै चीजहरू बनाउन चाहानुहुन्छ, तर तिनीहरू केवल मानव हुन्।
के तपाइँ केवल ती भन्दा धेरैको अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाईंमा उनीहरूको असन्तुष्टता केही हदसम्म, एक ठूलो पार्टनर कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने तपाईंको दृष्टिकोणमा बाँच्न असफल भएकोमा आधारित छ?
हुनसक्छ ती प्रकारका रोमान्टिक इशाराहरू नहुन सक्छन् जुन तपाईलाई मायाको महसुस हुन्छ।
वा तिनीहरू तपाईं गर्न सोध्नु भएको सबै चीजहरू गर्न असमर्थ छन् किनकि उनीहरूसँग समय छैन वा कसरी थाहा छैन।
हुनसक्छ तिनीहरूको सेक्स ड्राइभ तपाईंको जस्तो उच्च छैन।
कहिलेकाँही तपाइँले स्वीकार्नुपर्दछ कि तपाइँको पार्टनरले सोच्न वा कार्य गर्न गइरहेको छैन सब भन्दा आदर्श तरिकामा कार्य गर्दछ।
ती चीजहरू गर्नेछन् जसले तपाईलाई रिस उठाउछ वा नरकलाई तपाईबाट अलमल्याउँछ। यो केवल एक अपरिहार्य दुखाइ बिन्दु हो जब दुई व्यक्तिको जीवन एकसाथ साझा हुन्छ।
२. सोध्नुहोस् कि तपाईंलाई नियन्त्रणमा जान दिनु पर्छ।
माथि उल्लेख गरिएझैं रिसको सामान्य कारण ती समयहरू हुन् जब तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई केही फरक तरीकाले केही गर्दछ।
तपाईंसँग काम गर्ने धेरै विशेष तरीका छ - जुन तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ जुन उत्तम हो।
तर तपाईंको पार्टनरले अन्यथा सोच्दछ। वा, कम्तिमा, उनीहरूले कुनै ठूलो चीजको रूपमा देख्दैनन्।
र तपाईले उनीहरूलाई बारम्बार सोध्नुभयो भने पनि, ती तपाईको इच्छाहरू अनुरुप संघर्ष गर्दछन्।
हुनसक्छ यो समयलाई स्वीकार गर्न को लागी तपाइँको केहि गर्ने तरिका एक मात्र तरीका छैन।
निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंले यसको अनाजको कचौरा सिधा डिशवाशरमा यसलाई प्रयोग पछि राख्न सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरूले यसलाई सिink्कमा छोड्छन्।
वा तिनीहरू टिभीलाई पृष्ठभूमि शोरका लागि राख्नुहोस् यदि तिनीहरू वास्तवमै हेरिरहेका छैनन् भने, जहाँ तपाईं शान्ति र शान्त हुनुहुन्छ।
जति सक्दो गाह्रो छ, तपाईंले यो तथ्यलाई स्वीकार्नुपर्दछ कि तपाईंहरू दुवै सही हुनुहुन्छ र तपाईं दुवै गलत हुनुहुन्न।
उनीहरूसँग उनीहरूका मार्गहरू छन्, तपाईंसँग तपाईंको तरिका छ, र यो लगभग अपरिहार्य छ कि ती समय-समयमा एक अर्काको बिरूद्धमा जोडिनेछ।
तपाइँ तपाइँका सर्तहरूमा सँधै चीजहरू राख्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंको पार्टनरको बानी छ - धेरै जसो यति इra्ग्रेन गरिएको छ कि त्यसलाई तोक्न गाह्रो छ।
अवश्य पनि, उनीहरूले सँधै चीजहरू आफ्नै तरिकाले प्राप्त गर्ने अपेक्षा गर्न सक्दैनन्। त्यहाँ सन्तुलन हुनु आवश्यक छ (हामी त्यस पछि कुरा गर्नेछौं)।
यो महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि आकाशमा पस्नेछैन यदि तपाईंले जीवनमा आफ्नो कसिलो पकड छोड्नुभयो र कसरी तपाईं चीजहरू गर्न चाहनुहुन्छ।
तपाईंको पार्टनरलाई कहिले काहि उनीहरूको तरिकाबाट केही गर्न दिनुहोस् र हेर्नुहोस् कि केही चीजहरू राम्रोसँग बाहिर जान्छन्।
Or. वा, सोध्नुहोस् कि तपाईंलाई अधिक दृढ हुनु आवश्यक छ कि छैन।
केही आवश्यकताहरू अपेक्षा गर्न यो एकदम व्यावहारिक छ र पूरा हुन चाहन्छ
तर तपाईले आफ्नो पार्टनरलाई यो स्पष्ट पार्नुभएसम्म, सम्भाव्यता तपाई प्राय: निराश हुन्छन् - र रिसाउनुहुन्छ।
यदि तपाईं त्यस्तो व्यक्तिको प्रकार हुनुहुन्छ जो द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ र तपाईंको इच्छा व्यक्त गर्नमा उत्कृष्ट हुनुहुन्न, यो समय हो तपाईंले आफ्नो अडिग आवाज पाउनुभयो।
यदि तपाईंको पार्टनरले तपाईंको ख्याल राख्छ भने, ती चीजहरू तपाईंको लागि महत्त्वेपूर्ण चीजहरू समायोजन गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछन्।
केवल आफैंलाई महत्त्वपूर्ण चीजहरुमा ठोकुवा गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
यदि तपाईं महत्वहीन लाग्ने चीजहरूको लागि धेरै अनुरोधहरू गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको पार्टनरले तपाईंलाई उनीहरूलाई सताउन लगाउन सक्छ।
यसैले किन अघिल्लो बिन्दु र यो एक लाई एकको रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। तपाइँको प्राथमिकताहरू के हो भनेर तपाइँले थाहा पाउनु पर्छ तपाइँ कसरी तपाइँको साथीलाई कार्य गर्न चाहनुहुन्छ।
जान्नुहोस् कहिले जान दिनुहोस् र कहिले बोल्ने र सुन्न सकिन्छ।
अवश्य पनि, तपाइँ पनि ती आवश्यकताहरूको बारेमा समान रूपमा सचेत हुनुपर्दछ र तपाइँको पार्टनरले व्यक्त गर्नुभयो जुन उचित छ।
यो दिन र लिनु पर्छ।
Your. तपाईंको सम्बन्धमा राम्रो सन्तुलन खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यदि तपाइँको पार्टनरप्रतिको तपाइँको असंतोष मुख्यत: दिन प्रतिदिन जिम्मेवारिहरुमा निष्पक्षताको अभावबाट उत्पन्न भएको हो भने, सम्भवतः यो तपाइँले सम्बोधन गरेको समय हो।
तपाईंले तथापि, रातोरात ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुहुन्न - तिनीहरू असन्तुष्टि भएकोमा सहमत भए पनि (र तिनीहरूले नहुन पनि सक्छन्)।
यदि हाल यो विभाजन /०/30० जस्तो लाग्छ भने, एक पटकमा साना कदमहरू चाल्ने प्रयास गर्नुहोस् ताकि तपाईं / 65/3535 सम्म पुग्नुहोस्, त्यसपछि /०/ so०, र यस्तै।
तपाईं कहिले पनि सफा /०/50० विभाजनमा पुग्न सक्नुहुन्न र तपाईं त्यससँगै बस्न सक्नुहुन्छ कि सक्दैन भनेर निर्णय गर्नको लागि यो तपाईंको हो।
उही भावनाहरु को लागी जान्छ ...
यदि तपाईंलाई लाग्दछ कि तपाईंले सक्रिय समर्थनका साथ तपाईंको साथीसँगै उपस्थित भएर सबै समयमा ठूलो समर्थन दिनुहुन्छ भने, यो गाह्रो हुन सक्छ जब उनीहरूले क्षतिपूर्ति गर्दैनन्।
तर जति धेरै तिनीहरूले यस सम्बन्धमा सुधार गर्न सक्दछन् र तपाईंको लागि प्रायः त्यहाँ आउनेछन् (र तिनीहरूले सुधार गर्न प्रयास गर्नुपर्छ), केहि व्यक्तिहरू यस प्रकारको कुरामा राम्रो छैनन्।
त्यसरी नै, यदि तपाईले सँधै पहिले माफ गर्नुहोस् भन्न वा असहमति पछि वार्तालाप सुरु गर्ने पाउनु भयो भने तपाईले आफ्नो भूमिका बदल्नु भन्दा यस भूमिकालाई स्वीकार्नुपर्दछ।
उनीहरूसँग अन्तर्निहित मुद्दाहरू हुन सक्छन् जसले तिनीहरूलाई उनीहरूको जोखिम देखाउनबाट रोक्छ - कमसेकम अरू कसैले तिनीहरूको गार्डलाई पहिले नपठाउँदासम्म।
त्यसो भए, हो, व्यावहारिक र भावनात्मक चीजहरूमा राम्रो सन्तुलनको लागि लक्ष्य राख्नुहोस्, तर पूर्ण समानताको आशा नगर्नुहोस् - त्यो सम्बन्धहरूकै स्वास्थ्यकरमा पनि दुर्लभ छ।
तपाईं जे गर्नुहुन्छ, स्कोर नराख्नुहोस्। सबै पछि, तपाईं एक टीम हुनुहुन्छ, विपक्षी होइन।
Their. उनीहरूका कमजोरीहरू स्वीकार्ने प्रयास गर्नुहोस्।
पहिले नै उल्लेख गरीएको छ, कोही पनि सिद्ध छैन।
हामी सबैमा त्रुटिहरू छन् - हामी स्वीकार गर्न चाहानु भन्दा बढी।
एक स्वस्थ सम्बन्ध रहेको एक हिस्सा हो कसैलाई को हो भनेर स्वीकार गर्दै होइन कि तपाईं तिनीहरू बन्न चाहनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो पार्टनरको सबै भन्दा राम्रा गुणहरू मात्र मनपर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रेम गर्नुपर्दछ, मौसा र सबै।
चाहे ती भावनात्मक अपरिपक्व, ईरिट, भुलक्कड, अव्यवस्थित, वा कुनै पनि वांछनीय चीजहरू भन्दा अनगिन्ती कम छन्, स्वीकार गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस् कि यी उनीहरूको एक अंश हुन्।
निश्चित छ, तपाईं उनीहरूलाई उनीहरूका केही त्रुटिहरू सम्बोधन गर्न आफैंमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईंले ती स्वीकार्नुपर्दछ कि ती (अझसम्म) सुधार गर्न सक्दैनन्।
एकै साथ नैतिक श्रेष्ठताको ओहदा लिनबाट बच्नुहोस्।
अरूमा भएका कमजोरीहरू पत्ता लगाउन जति सजिलो हुन्छ, आफैंमा कमजोरीहरू चिन्न यो अझ गाह्रो हुन्छ।
यदि तपाईं मानसिकता भन्दा एक पवित्र अपनाउनु हुन्छ भने, तपाईं तपाईंको पार्टनरलाई अलग पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ र उनीहरूमा आफ्नो सम्बन्ध समस्याहरूको सबै दोष राखेर उनीहरूलाई भावनात्मक क्षति पुर्‍याउनुहुन्छ।
सम्झनुहोस् कि तपाईं को लागी स्वीकार्य महसुस गर्न चाहानुहुन्छ। यो खुला व्यक्तिको एक विशाल हिस्सा हो र अर्को व्यक्तिको साथ कमजोर हुन सक्छ।
यदि तपाईं अरूलाई को हो भनेर स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं कसरी उस्तै शिष्टाचार विस्तार गर्न अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ?
Your. तपाइँको पार्टनरको सबै सकारात्मकमा विचार गर्नुहोस्।
तपाईंको पार्टनरका त्रुटिहरू स्वीकार गर्न प्रयास गर्दा, यसको सट्टामा तिनीहरूका सबै सकारात्मक गुणहरूको बारेमा सोच्न अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ।
प्राय: कुनै पनि समयमा तपाईको साथीको बारेमा तपाईले महसुस गर्ने भावनाको सामान्य भावना तपाईको टाउकोबाट हुँदै जान्छ।
जब ती विचारहरू सबै तपाइँको साथीले सही गरेको छैन द्वारा सबै उपभोग हुन्छन्, तपाईं तिनीहरूप्रति नकारात्मक महसुस गर्नुहुन्छ।
जब ती विचारहरू तपाईंको पार्टनरले गरेका राम्रा चीजहरू हुन्, वा तपाईंलाई तिनीहरूको गुणहरू मनपर्दछ, तपाईं तिनीहरूको बारेमा सकारात्मक महसुस गर्नुहुन्छ।
त्यसैले त्यस्तो समयमा जब असन्तोषले तपाईंको दिमाग भर्दछ, तपाईंको पार्टनरको राम्रो पोइन्टमा केन्द्रित गरेर यसलाई मेटाउने प्रयास गर्नुहोस्।
ती सबै चीजहरू चिन्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो सम्बन्धमा आभारी हुनुपर्दछ। ती सबै चीजहरू जुन तपाईं वास्तवमै कदर गर्नुहुन्छ।
'किन चिन्ता गर्नुहुन्छ?' को कुनै पनि विचारलाई चुनौती दिनुहोस्। र 'उनीहरूले वास्तवमा मेरो चिन्ता गर्दैनन्', काउन्टर-प्रुफको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई परेशान पार्ने कारण दिन्छ र उनीहरूको ख्याल राख्छ भनेर प्रमाणित गर्दछ।
Forgiveness. क्षमा र समानुभूति अभ्यास गर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् कि असन्तुष्टिको परिभाषामा अनुचितताको भावना समावेश छ। यो अन्याय भइरहेको भावनामा आधारित छ।
त्यसकारण, यदि तपाईंले आफ्नो साथीलाई रिस उठाउन छोड्नुभयो भने माफी आवश्यक छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदा यो अचम्म मान्नुपर्दैन।
क्षमा दुई भागमा आउँछ। सबैभन्दा पहिला गलत कार्यको बदला लिने निर्णय नगर्नु हो।
यसले दुबै पक्षको आक्रोश बढाउनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ र प्राय: नतिजा भन्दा एक अर्काबाट टाढा फिर्ता लिन्छ।
दोस्रो भावनात्मक पक्ष हो जुन धेरै जटिल छ र अधिक समय लिन्छ।
तर यो अभ्यास संग सजिलो हुन्छ।
प्रक्रियाको अंशमा तपाइँको पार्टनरसँग समानुभूति राख्नु समावेश छ किन बुझ्ने कोशिस गर्नुको लागि किन विशेष व्यवहार गरियो (वा कार्य जारी राख्नुहोस्) जसले अनुचितताको भावनामा पुर्‍याउँछ।
तपाईंको साथीको आँखाबाट चीजहरू हेर्नको लागि यो चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ जब तपाईं तिनीहरूको मनमा क्रोधित हुनुहुन्छ, तर यदि तपाईं केवल परिस्थितिको प्रस consider्गलाई विचार गर्न सक्नुहुन्छ र किन उनीहरूले गरेको (वा गरे) सोध्नुहोस्, यसले तपाईंलाई एक चरण सत्यको नजिक ल्याउँदछ। बुझेर र अन्तमा माफी।
तर धेरै लामो कुरामा चिन्तित नहुनुहोस्। तपाइँको दिमागमा बारम्बार पुनः प्ले गर्नाले क्षमाको भावनात्मक पक्षमा ढिलाइ हुन्छ।
सम्बन्धित पोस्ट: कसैलाई कसरी क्षमा गर्ने: क्षमाको २ विज्ञानमा आधारित मोडेलहरू
Cept. स्वीकार्नुहोस् कि सबैजना संघर्ष गरिरहेका छन् - तपाईंको पार्टनर सहित।
धेरै मानिसहरु आफ्नो जीवन मा कुनै प्रकारको सताएको मुद्दा बिना छन्।
र, सत्यलाई भनौं, हामी मध्ये अधिकांश कुनै पनि एक पटकमा मुद्दाहरूको सम्पूर्ण होस्ट जुगल गर्छौं।
हामी संघर्षरत हुनु कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन। हामी सबै।
जब तपाइँ स्विकार गर्नुहुन्छ कि तपाइँको पार्टनर पनि संघर्ष गरिरहेको छ, यसले तपाइँलाई केही ढिलो काट्न र कम भावनात्मक हिसाबले उनीहरूले गर्ने कुरा वा चीज नगरी प्रेरणा पाउन सहयोग पुर्‍याउँदछ जसले तपाइँलाई नाजायज अनुभूति दिन्छ।
र जब तपाईं यसमा हुनुहुन्छ, आफैलाई एक तरिका दिनुहोस् तपाईंको तरिका महसुस गर्न को लागी। यो बुझनीय छ, यदि यो वांछनीय छैन भने पनि।
यदि तपाईं र तपाईंको पार्टनरले एक अर्कासँग थोरै बढी धैर्यता र अनुकम्पा राख्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईं असन्तुष्टिका भावनाहरूलाई घटाउनुहुनेछ।
Yourself। आफैमा काम गर्नुहोस्।
तपाईंको पार्टनरले तपाईंको जीवनमा ठूलो भूमिका खेल्छ, तर यसले भावनात्मक प्रभावलाई उचित गर्दैन यदि तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईं माथि हुन दिनु भयो।
त्यसोभए यदि तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि कारणको लागि रिसाउनुहुन्छ भने, सायद तपाईं आफ्नो मानसिक र भावनात्मक हितमा बढी भावनात्मक रूपमा स्वतन्त्र हुने लक्ष्यको साथ काम गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको मतलब यो हो कि तपाईं खुशी र प्रेमको आफ्नै स्रोत हुन सक्नुहुन्छ। र तपाइँ तपाइँको पार्टनरले के गर्ने बाट त्यति प्रभावित हुनुहुने छैन।
यो विशेष गरी सहयोगी हो यदि तपाईंको पार्टनर भावनात्मक रूपमा अनुपलब्ध वा अपरिपक्व छ।
तपाइँ आफूले चाहानुभएको तरिकामा बढ्नको लागि उनीहरूमा निर्भर हुन सक्षम हुनुहुने छैन, तर तपाईंको स्वयं-कामको मतलब यसको सट्टामा तपाईं आफैमा भर पर्न सक्नुहुन्छ।
सम्बन्धित पोस्ट: भावनात्मक रूपमा स्वतन्त्र हुन र खुशीको लागि अरूमा भर पर्न कसरी
१०. आफ्नो साथीलाई कुरा गर्नुहोस्।
माथिको कुनै पनि टिप्स जुन तपाईं लिनुहुन्छ, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो साथीसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न सिक्नुभयो।
धेरै व्यक्तिहरू आफ्ना साझेदारहरूले उनीहरूको दिमाग पढ्न सक्षम भएको आशा गर्छन्। यो प्रायः व्यर्थ हुन्छ किनकि मानिस आफ्नै विचार र समस्यामा डुबेको हुन्छ।
त्यसोभए तपाईले आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्दा खुला र इमान्दार हुनुपर्दछ।
यदि उनीहरूले केहि गरेका वा नगरेकोमा यदि तपाईं निराश हुनुहुन्छ भने, उनीहरूलाई भन्नुहोस्।
यदि तपाईं सँगै ठूलो निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै चिन्ता व्यक्त गर्नुहोस् जुन तपाईं तिनीहरूको विशेष प्राथमिकतामा गर्नुहुन्छ। शान्त रहनको लागि तिनीहरूलाई लुकाउनुहोस्।
यी प्रकारका चीजहरूलाई चाँडै सम्बोधन गरेर, तपाईं तिनीहरूसँग डिल गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई कहिले असन्तुष्टि हुनबाट रोक्नुहुनेछ।
एक उपयोगी टिप भनेको तपाइँको विचार र भावनाहरू छलफल गर्दा 'म' बयानहरू प्रयोग गर्नु हो। 'तपाईं' कथनहरू प्रयोग नगर्नुहोस् जुन अर्को व्यक्तिको बचाउको लागि मात्र सेवा गर्दछ।
उदाहरणको लागि, भन्नुहोस्, 'म एक्लो महसुस गर्छु र सप्ताहन्त सँगै बिताउन चाहन्छु,' बरु, 'तपाईं जहिले पनि आफ्ना साथीहरूसँग बाहिर हुनुहुनेछ र यसले मलाई अप्रसन्न महसुस गराउँदछ।'
पहिले तपाइँको भावनालाई व्यक्त गर्दछ, तर यसले सकारात्मक समाधान पनि प्रदान गर्दछ। तपाईंको पार्टनरसँग तपाईंको प्रस्तावसँग सहमत नहुनु पर्ने थोरै कारणहरू छन्।
दोस्रोले तपाइँको भावनालाई व्यक्त गर्दछ, तर यसले नकारात्मक तरीकाले गर्दछ जुन तपाइँको पार्टनरलाई दोष दिनुहुन्छ। उनीहरूले रचनात्मक तरिकामा प्रतिक्रिया दिन सक्ने छैनन्।
जब तपाईं उनीहरूसँग हुन सक्ने कुनै निराशाको बारेमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसले तपाईंलाई विरक्त पार्ने कुरालाई सोधेर परिस्थिति बिगार्न मद्दत गर्दछ।
यस तरिकाले, तपाईंले सम्पूर्ण कुराकानीलाई तपाईंको सम्बन्धमा सामना गर्ने मुद्दाहरूलाई पार गर्नका लागि संयुक्त प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईं केहि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न इच्छुक देखाउँदै हुनुहुन्छ र यसले उनीहरूको उचित हिस्सा लिनको लागि अझ खुला गर्दछ।
११. सम्बन्ध सम्बन्धका सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ र तपाइँको पार्टनरले तपाइँको मुद्दाहरूको बारेमा छलफल गर्दा शान्त र सकरात्मक कुराकानी गर्न संघर्ष गरिरहनु भएको छ भने, यसले तेस्रो पक्ष मध्यस्थकर्तालाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
सम्बन्ध परामर्श, केही हदसम्म, दबाब हटाउन सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंसँग त्यहाँ कोही छ जो दुबै पक्ष सुन्नेछ।
र उनीहरूको प्रशिक्षण र अनुभव दिएर, एक सल्लाहकारले कुनै खास स्टिकि point पोइन्टमा कसरी पुग्ने भन्ने सम्बन्धमा टेलर्ड सल्लाह प्रदान गर्न सक्षम हुन सक्छ।
थोरै मा, तेस्रो व्यक्तिको उपस्थिति कुरा गर्न को लागी एक अधिक सहमत वातावरण प्रदान गर्न सक्छ।
जे भए पनि, तपाई उहि पूर्ण कोपमा उड्ने सम्भावना कम हुनुहुनेछ जब त्यहाँ एउटै कोठामा कोही छ - जो तपाईलाई राम्ररी चिन्नुहुन्न।
१२. डोरम्याट नहुनुहोस्।
यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि राम्रो सम्बन्धमा केही दिनुहोस् र लिनुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो पार्टनर रिसाउनुहुन्छ किनकि यस्तो देखिन्छ कि तराजूहरू उनीहरूको पक्षमा दृढताका साथ सुझाव दिएका छन्, तपाईंले सोध्नु पर्छ कि ती भावनाहरू कम गर्नका लागि पर्याप्त परिवर्तन गर्न सक्षम छन् कि छैनन्।
आफैलाई फाइदा लिनको लागि अनुमति नदिनुहोस्, र एक निर्भर सम्बन्धमा पर्नबाट जोगिनुहोस् जहाँ तपाईं क्यारियरको भूमिका लिनुहुन्छ।
जति तपाई आफ्नो साथीलाई माया गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई उनीहरुलाई बदल्न सक्नुहुन्न - केवल तिनीहरु आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्दछन्, यदि तिनीहरु चाहान्छन भने।
जान्नुहोस् कि यो सम्बन्ध समाप्त गर्न तपाईंको भलोको लागि कहिले हुन्छ। सबै प्रेम रहन सक्दैन, र यो ठीक छ।
अझै पक्का हुनुहुन्न तपाईंले आफ्नो पार्टनरलाई मन पराउने आक्रोशको बारेमा के गर्ने?जब तपाईंसँग यस्तो सम्बन्धमा अप्ठ्यारो भावनाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई एक्लै पार गर्न गाह्रो हुन सक्छ। तर तपाईले गर्नु हुन्न। चाहे तपाई आफैले वा दम्पतीको रूपमा, तपाईले प्रशिक्षित सम्बन्ध सल्लाहकारसँग कुरा गरेर फाइदा उठाउनुहुनेछ। तिनीहरू वास्तवमै गलत दिशामा जाँदै गरेको सम्बन्ध बचत गर्न मद्दत गर्न सक्दछन्।त्यसोभए किन रिलेशनशिप हीरोको सम्बन्ध विशेषज्ञसँग अनलाइन कुराकानी नगर्नुहोस् जसले तपाईंलाई चीजहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। केवल
Control तरीकाहरू नियन्त्रणमा राख्न र सम्बन्धमा रिसाउनेसँग
१२ रणनीतिहरू प्रयोग गर्न जब तपाईंलाई चिढचिलो महसुस भइरहेको छ
यदि तपाईं विवाहित र एक्लो हुनुहुन्छ भने, तपाईंले के गर्नु आवश्यक छ यहाँ छ
२ No कुनै बुलेश * t साइन तपाईंको सम्बन्ध पहिले नै समाप्त भइसकेको छ
एक सम्बन्ध मा नियन्त्रण हुन रोक्न को लागी7तरिकाहरू
प्रत्येक दिन को रूप मा यो आउँछ
जो wwe divas च्याम्पियन हो
कसरी तपाइँको कार्यहरु को लागी उत्तरदायी हुन
मास्क बिना रे रहस्यमय
गार्थ ब्रुक्स र त्रिशा ईयरवुड विवाहित छन्
केविन ओ leary को शुद्ध मूल्य